China ornamental Bonsai osisi nke Ginseng Ficus Microcarpa ụlọ ọrụ na-emepụta | Anwụ na-acha Ifuru
Osisi Bonsai nke Ginseng Ficus Microcarpa
A na-azụ Ficus microcarpa dị ka osisi ịchọ mma maka ịkọ n'ubi, ogige ntụrụndụ, na igbe dị ka ihe ọkụkụ dị n'ime ụlọ na ụdị nke bonsai. Ọ dị mfe itolite ma nwee ụdị nka pụrụ iche. Ficus microcarpa bara ọgaranya nke ukwuu. Ficus ginseng pụtara na mgbọrọgwụ nke ficus dị ka ginseng. E nwekwara ụdị S, ọdịdị ọhịa, ụdị mgbọrọgwụ, ụdị mmiri zuru ezu, ọdịdị ugwu, ọdịdị net, wdg.
Size: Obere, Obere, Ọkara, EZE
Arọ: 150g, 250g, 500g, 750g, 1000g, 1500g, 2000g, 4000g, 5000g, 7500g, 10000g, 1500GR .. na .to 5000g.
Nkwakọ ngwaahịa & Mbupu:
Boxes Igbe osisi: Igbe osisi 8 maka otu igbe ụkwụ Reefer 40, igbe igbe 4 maka otu igbe ụkwụ Reefer 20 ụkwụ.
● Casegwè Iron
Kwụ ụgwọ: T / T 30% n'ọdịnihu, itule megide akwụkwọ nke mbupu akwụkwọ.
Ficus microcarpa atọ ga-agbaso ụkpụrụ nke enweghị mmiri ọ bụla, a wụsara mmiri nke ọma. Ihicha ebe a putara na ala ya na okpukpu 0.5cm n’elu ala ala bekee bu akọrọ, ma ala bekee adighi asacha. Ọ bụrụ na ọ kpọọchara nkụ, ọ ga-emebi osisi banyan nnukwu nsogbu.
Ekwesiri iji fatịlaịza ficus microcarpa mee ya na usoro nke fatịlaịza dị mkpa na ngwa ngwa, na-ezere itinye nke fatịlaịza kemịkal dị elu ma ọ bụ fatịlaịza organic na-enweghị gbaa ụka, ma ọ bụghị na ọ ga-akpata mmebi fatịlaịza, ịghapụta ma ọ bụ ọnwụ.
Ficus microcarpa na-eto nke ọma na gburugburu ebe ọkụ zuru oke. Ọ bụrụ na ha nwere ike kpuchie 30% - 50% na oge okpomọkụ dị elu n'oge ọkọchị, agba akwụkwọ ga-acha akwụkwọ ndụ. Otú ọ dị, mgbe ọnọdụ okpomọkụ dị ala karịa 30 “C, ọ ka mma ịghara ikpuchi, iji zere agụba na-acha odo odo ma daa.
Nke gara aga: Osisi Ornamental Microcarpa Ficus Root Shape
Osote: Osisi Osisi Ficus Microcarpa Bonsai
Ficus S Ọdịdị
Na-abụghị dọwara Ficus
Taiwan Bonsai pedị Ficus